ILas Tablas de Daimiel ihlushwa isomiso esikhulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
ILas Tablas de Daimiel ibhekene nesomiso esibi
ITablas de Daimiel National Park etholakala eCiudad Real ihlaselwa yisomiso nokulahleka okuqhubekayo kwamanzi okudalwe wukuguquka kwesimo sezulu. Ngenxa yamazinga okushisa aphezulu aqoshwe ezinyangeni ezisanda kwedlula, inani lamanzi aphuphumayo liyenyuka, ngakho-ke inani lamanzi liyancipha.
Sekuvele unyaka wesine owomile ukuthi iPaki kaZwelonke ihlupheka futhi kokubili ukuhlukahluka kwemvelo okusekelayo kanye nokulinganisela kwemvelo kuya ngokuya kwehla. Kwenzekani uma isomiso siqhubeka?
1 Isomiso eTablas de Daimiel
Isomiso eTablas de Daimiel
Kwenziwe umbiko okhombisa ukuthi ukungabi khona kwemvula ngenxa yonyaka wesine owomile isifundazwe saseCiudad Real esibhalisile ngamalitha angama-317,6 ngemitha eyisikwele eqoqwe esiteshini sezulu seDaimiel, inciphise ukulethwa kwamanzi esiqiwini sikazwelonke, esayeka ukwamukela amanzi ngomfula iGuadiana maphakathi noJulayi kulo nyaka.
Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, ipaki likazwelonke ligcina umhlaba ugcwele amahektare ayi-1.343. Namuhla, ine-528 ha kuphela enamanzi. Lokhu kudala imithelela eminingi ezinyonini, ezingenandawo yokuphumula emizileni yazo efudukayo. Kulo nyaka kubhaliswe onogolantethe abamnyama abangama-60 ezindaweni ezifudukayo, izipuni ezingama-86 nobukhona obukhulu be-ardeidae. Lokhu kusho ukuthi ipaki kazwelonke ibaluleke kakhulu ezinhlotsheni eziningi zezinyoni, ezingathinteka ngokuntuleka kwamanzi.
Sekuvele ukuthi inqubo yokuvaleka iyenzeka. Lokhu kwenzeka njengomphumela wokubola kwesitshalo esisele, okuhlanganiswa nokuchithwa kokuqina okumisiwe, kukhiqizwa echibini lamachibi epaki futhi anciphisa amandla abo okugcina amanzi.
Labo ababhekele ipaki bahlaziya umthwalo omkhulu wezakhamzimba orekhodwe yizinsalela. Lokhu kungaba kubi, ngoba kuveza iphunga elibi nama-cladophors anikeza izivakashi isithombe esibi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Isomiso » ILas Tablas de Daimiel ibhekene nesomiso esibi
Isiphepho saseTropical i-Ophelia singafinyelela eGalicia
Isikhathi sesiphepho sango-2017, esisebenza kakhulu eminyakeni engaphezu kwekhulu